Kulanka kaliya uu cabsi dareemay, sirta ka dambeysa guulaha Zidane & Dani Carvajal oo dhowr arrimood ka hadlay – Gool FM
(Madrid) 24 Jan 2020. Daafaca reer Spain ee Dani Carvajal ayaa xaqiijiyay inuu dareemay cabsi hal mar oo kaliya, wuxuuna ku tilmaamay inay aheyd finalkii Champions League oo ay la ciyaareen Atletico Madrid 2014-kii.
Dhinaca kale Dani Carvajal ayaa wuxuu tilmaamay in u ciyaarista kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xambaarsan tahay cadaadis badan.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Dani Carvajal waxaana uu yiri:
“Waxaan dareemay in koobka uu gacmaheena ka bixi doono, waqtiguna si dhakhso ah ayuu u socday, waxaana moodayay in kooxda deriska ay ku guuleysan doonto Champions League”.
“Waxaan u maleynayaa inay tahay ciyaarta kaliya ee aan cabsi ky dareemay garoonka dhexdiisa”.
Intaas kaddib Dani Carvajal ayaa wuxuu ka hadlay sirta ka dambeysa guulaha macalinka kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane wuxuuna yiri:
“Furaha guusha waa kooxda iyo u shaqeynta sidii hal unug”.
“Markii uu Zidane yimid wuxuu abuuray falsafadan, haddana wuu ku celinayaa, xitaa haddii aysan kooxda fiicneyn”.
“Wuxuu u muuqdaa mid nasiib badan, laakiin waxaan u maleynayaa inuu si adag u shaqeeyo, wuxuu ku kalsoon yahay dhamaan ciyaartoyda, wuxuu garanayaa nooca kooxda uu heysto, qaabka iyo goorta ciyaaryahan walba uu u adeegsan karo, taasina waa wax aad u wanaagsan”.